Accueil > Gazetin'ny nosy > Loholona Besoa Eric : Voatonontonona amin’ny resaka andramena
Loholona Besoa Eric : Voatonontonona amin’ny resaka andramena
I Eric Besoa no voatendry ho loholon’i Madagasikara nisolo ny toeran’ny Loholona Imbiky Herilaza, izay voatendry Minisitry ny Fitsarana. Avy hatrany koa dia voafidin’ny loholona namany ho filoha lefitry ny Birao maharitry ny Antenimierandoholona koa izy, nandimby an’Imbiky Herilaza hatrany.
Nitalakotroka ny fandraisana azy raha tonga tany Analanjirofo izy ny herinandro teo. Fantatra ihany koa, araka ny loharanom-baovao, fa olona akaiky ny filohampirenena Rajoelina any amin’iny faritr’i Diana iny no nanolotra an’i Besoa Eric tamin’izao nanendrena azy ho loholon’i Madagasikara izao.
Ny loharanom-baovao koa dia nahenoana, raha nitranga ny fahatrarana andramena tamin’iny herinandro iny, fa tokony ho isan’ny olona tsy afa-bela amin’nty raharahan’andramena i Besoa Eric.
Aiza avokoa tokoa moa izao ireo re fa voatonontonona tamin’ny resaka andramena toa an-dry Bekassy, ry Jaovato…?, I Eddy ihany izao no voafonja hatreto. Re indray koa ity i Besoa.
Etsy ankilany, ny manitikitika ny sain’ny maro hatreto dia ny tsy mbola nahitana na nahafantarana na nivoahan’ny anaran’ny “Trondro vaventy” na manam-pahefana ambony ara-panjakana na ny taloha na ny teo aloha na ny taty aoriana momba ity fanondranana andramena izay harem-pirenena ity. Sarotra ny hino hoe “trondro madinika” ve ho afaka manondrana andramena lafo vidy be toa izany any ampita? “Trondro madinika” ve hanana fahafantarana mpanambola-be handray ireny harem-pirenena ireny any ampita any ?
Raha toa ka voasaringotra tokoa amin’ny resaka andramena i Besoa Eric dia tsy arovan’ny tombon-jo maha-parlemantera azy izy (immunité parlementaire) satria talohan’ny naha-loholona azy izy no nanao ilay “raharaha manga”. Ny fiarovana azy amin’ny “ampingan’ny politika maloto” no tsy ferana.